Hondo Pakati peUkraine neRussia Yoenderera Mberi Kunyangwe Kuine Hurukuro Dzerunyararo
Kubvumbi 02, 2022
Ukraine inonzi yabhombawo matangi epeturu muRussia.
Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine yabhombawo matangi epeturu mu Russia kunyangwe hazvo pane nhaurirano dzerunyararo dziri kuitwa pakati penyika mbiri idzi pari zvino.
Sangano reInternational Federation Of Red Cross Crescent Societies razivisa kuti vanhu vanosvika mamiriyoni gumi nemasere, kana kuti 18 million, vari kuda rubatsiro kusanganisira vamwe mamiriyoni mana, kana kuti 4 million, vakatiza hondo iyi.
Sangano iri rinoti kuendesa rubatsiro mune dzimwe nzvimbo dziri muUkraine kuri kunetsa nenyaya yemabhambo ari kukandwa neRussia.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuColumbus mudunhu reOhio muno mu America, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti vanoona nhaurirano dzerunyararo idzi dzichizobudirira kunyangwe hazvo nyika mbiri idzi dzichiri kurwisana pari zvino.
"Nyika mbiri idzi dzicharamba dzichiita nhaurirano dzerunyararo sezvo vese varasikirwa nezvakawanda kusanganisira hupenyu hwevanhu nezvehupfumi," VaMasocha vaudza Studio7.
Hurukuro na VaElliot Masocha